Funding FAQ - McKnight Foundation
Ka hel jawaabaha su'aalaha dhaqaalaha badanaa la is weydiiyo.
Maxay yihiin shuruudaha aasaasiga ah ee xaq u lahaanshaha deeqda?
Iyadoo ay jiraan waxyaabo yar oo ka reeban, codsadayaashu waa inay ka soocaan Adeegga Canshuuraha Gudaha sida canshuur-bixinta, hay'adaha aan macaash doonka ahayn ee u qalma deeqda. Waxaan bixinnaa qorsheyn, hawlgal, iyo deeqaha mashruuca. Fadlan ogow in aasaaska aasaasiga ah ee aasaasiga ah ee aasaasiga ah ee aasaasiga ah ee aasaasiga ah ee hay'adda maalgelinta waa gobolka Minnesota ee Farshaxankeena, Waxbarashada, Miisaaniyada Minnesota, iyo Barnaamijyada Gobolka iyo Bulshada.
Waxaan aaminsanahay in ururkeyga ama barnaamijkaygu uu ku habboon yahay tilmaamaha McKnight. Sideen u codsaneynaa deeqda?
Ku bilaw inaad naftaada kala barato kala duwanaanshaheena Barnaamijyada iyo xeeladaha gaarka ah iyo shuruudaha deeq-lacageedka. Fadlan ogow in barnaamijyada qaarkood ay yihiin casumaad.
Kama jawaabi doono wixii su'aalo ah ee maaliyadeed ee si cad u muuqda meel ka baxsan meelaha McKnight ee xiisaha barnaamijka.
Haddii aad ku haboon tahay shuruudaha, naga soo wac (612) 333-4220 si aad ugala hadashaan su'aalahaaga agaasimaha barnaamijka ama sarkaalka barnaamijka ee aagga deeq-lacageedkaaga. Haddii shaqaalaha barnaamijka McKnight ay go'aamiyaan in aasaaska uu tixgelin karo maalgelinta, waxaanu bixin doonaa tilmaamo ku saabsan soo gudbinta qorshe.
Maxaan u heli karaa nidaamka codsiga internetka si aan u soo gudbino baaritaan cusub oo maaliyadeed?
Nidaamka codsiyada internetka ayaa la heli karaa oo keliya laba toddobaad kahor muddada kama dambaysta ah, kaas oo dhacaya rubuc kasta. Hubi "sida loo dalbado" bogga aagga barnaamijka wixii faahfaahin dheeraad ah ee kama dambaysta ah waxay ku kala duwan yihiin barnaamijyada.
Maxaan u heli kari waayay tilmaamo ku haboon meertahayga shaqo?
Waxaan aamminsanahay in aasaaska uu noqon karo mid wax ku ool ah adoo xoogga saaraya khayraadkooda barnaamijyo iyo / ama juqraafi yar. Taas macnaheedu maaha inaan taageerno mashaariic badan oo qiimo leh oo ka baxsan danaha barnaamijkeena.
Maxay yihiin qawaaniinta hareeraha?
Hay'adda waxaa laga yaabaa inay tixgeliso maalgelinta codsiyada dadaalka sida u doodista si loo hagaajiyo siyaasadaha iyo sharciyada maamulka ee hay'adaha fulinta, garsoorka iyo hay'adaha maamulka; wadaagista macluumaadka oo dhexdhexaad ah, aan aheyn dhexdhexaad, iyo si buuxda u sharaxaya labada dhinac ee arrin sharci ah oo sharci ah; iyo cilmi baaris iyo waxbarasho.
Sida loo baahan yahay Xeerka Dakhliga Gudaha ee Gudaha, Hay'addu maaha inay maalgeliso isku daygeeda inay saamayn ku yeelato sharciyada la soo jeediyey ama la soo jeediyay, oo ay ku jiraan aftida, sharciyada degaanka, iyo qaraarada. Mamnuucidaan guud ahaan waxaa ka mid ah ku-meel-gaadhka tooska ah ee sharci-dejiyeyaasha iyo saraakiisha kale ee dawladda iyada oo la tixraacayo sharciyada gaarka ah, iyo ololaha xayeysiinta warbaahinta ee loogu talagalay saamaynta sharci gaar ah.
Haddii aad qabtid su'aalo ku saabsan aqbalaadda hawlqabadka la soo jeediyey, fadlan dib u eegis qodobada faahfaahsan ee ku saabsan waxqabadyada la mamnuucay ee Qeybta 4945 (e) ee Xeerka Dakhliga Gudaha iyo Qasnadda Khasnadda Qaybta 53.4945-2.